Markaad is barbar dhigayso Pterostilbene Vs Resveratrol, waxaad ogaan doontaa inay jiraan xaqiiqooyin badan oo kaa maqnaa labada. Ku noolaanshaha nolol caafimaad leh waxay u baahan tahay inaad faallo ka bixiso cunto caafimaad leh, la jimicsi wadar ahaan dawooyinka habboon. Si kastaba ha noqotee, waan ilaalin karnaa dhammaan kuwan, laakiin dhibaatooyinka qaar sida dhibaatooyinka neerfaha ayaa sii socon kara.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad fahanto in kaabayaasha ay ku jiraan Pterostilbene iyo Resveratrol ayaa kaa caawin kara maaraynta qaar ka mid ah. Ilaa iyo inta shirkadaha dawooyinka ay ku darayaan xeryahooda kabitaankooda, way ku adag tahay in loo aqoonsado midka ugu fiican caafimaadkaaga. Sidaa darteed, waxaan yeelan doonnaa dib u eegis faahfaahsan inta aan wax ka qabaneyno muddada dheer ee pterostilbene iyo ilaha pverostilbene resveratrol
Waa maxay Resveratrol?
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, dad badan ayaa dhiirrigeliyay khamriga cas, iyagoo ku booriyay inay leeyihiin faa'iidooyin caafimaad oo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, waxa aan la sharixi karin waa sida ay ugu gudbiso faa'iidooyinkaan daaweynta ee jirka. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ogaan doontaa in noocyo badan oo cilmi baaris ah laga sameeyay khamriga cas, waana iska cadahay inay kujirto isku-dhaf waxtar u leh caafimaadkeena.
Khamriga cas waxaa laga sameeyaa miro canab ah oo Resveratrol waa mid ka mid ah xeryahooda firfircoon. Resveratrol wuxuu ka yimaadaa koox loo yaqaan polyphenol oo badanaa loo yaqaan stilbenoid. Run maahan inaad kuheli karto Resveratrol khamri, laakiin ilo kale oo dabiici ah waxaa sidoo kale kamid ah looska iyo miraha. Si kastaba ha noqotee, haddii khamrigu uusan ahayn cabitaanka aad ugu jeceshahay, waad iibsan kartaa kaydinta ugu fiican ee Resveratrol la heli karo.
Waa maxay Pterostilbene?
Marka ay timaado Pterostilbene Vs Resveratrol, waxaad ogaan doontaa in noocyo badan oo cilmi baaris ah ay xuddun u ahaayeen Resveratrol. Si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinka Pterostilbene marka la eego caafimaadka way ka badnaan karaan tan Resveratrol, in kasta oo xeryahooda ay iskaga mid yihiin qaab dhismeedka laakiin ay ula dhaqmaan si ka duwan jirka bini'aadamka. Si kastaba ha noqotee, Pterostilbene oo ah antioxidant dabiici ah waxay si weyn ugu dhacdaa buluug. In kasta oo, ilo kale oo pterostilbene ay ka mid yihiin mulberiga, canab yicib in kasta oo ay ku dhacaan tiro yar. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay heerka nuugista sare iyo kordhinta astaamaha oksidheer marka la barbar dhigo Resveratrol. Intaa waxaa sii dheer, waad iibsan kartaa a Resveratrol dheeri ah haddii helitaanka midhaha ay dhibaato kuu noqon karto adiga.
Pterostilbene Vs Resveratrol, waa maxay qiyaasta saxda ah?
Su'aasha ah qiyaasta saxda ah ayaa walaac weyn ku abuurtay dad badan oo halkaas jooga. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa wax ku ool ah in la fahmo in kaabista qaar ay leedahay uruurinta sare ee Pterostilbene ama Resveratrol kuwa kale. Marka, kahor intaadan go'aansan waxa habboon, waxaad ka walwalsan tahay awoodda harraad. Tusaale ahaan, markaad cabto hal galaas oo khamri cas, waxaad u badan tahay inaad hesho 1mg oo Resveratrol ah.
In kasta oo qiyaasta caadiga ah ay welwel weyn lahayd, laakiin jahwareerka ayaa la xaliyay. Qiyaasta daawada resveratrol-ka ganacsiga ayaa inta badan u dhexeysa 50 illaa 250mg. Qiyaasta dawada 'resveratrol' ah ee ka sareysa qaybtaan waxay ku dambayn kartaa dhibaatooyinka qaarkood.
Dhinaca kale, Pterostilbene wuxuu ku dhacaa miraha qadar yar (qiyaastii 0.03mg oo ku jira buluug); sidaas awgeed, waxay noqon doontaa mid faa'iido leh haddii aad isticmaasho alaab-sameeyaal budada resveratrol ah. Si kastaba ha noqotee, waa la heli karaa marka la barbardhigo Resveratrol. Dhanka kale, qiyaasta ugufiican ee pterostilbene lama yaqaan inkasta oo ay jidhka kusii jiri karto toddobo maalmood.
Pterostilbene Vs Resveratrol Faa'iidooyinka Caafimaadka
Waxaa jira faa'iidooyin caafimaad oo dhowr ah oo aad hesho markii aad isticmaasho Pterostilbene Vs Resveratrol. Xerya-dhaqameedyadan ayaan lahayn waxyeellooyin dilaa ah sida dawooyinka kale ee aan suuqa ku aragnay. Aynu eegno waxa mid kastaa leeyahay.
Resveratrol iyo pterostilbene faa'iidooyinka kansarka
Dad badan ayaa lacag badan ku bixiya dawada kansarka ilaa heer aysan dhaqaale ahaan iyagu is taageeri karin mar dambe. Sidoo kale, waxaa jira noocyo badan oo kansar ah sida kansarka qanjirka 'prostate', kansarka ilmo galeenka, iyo kansarka naasaha, iyo kuwa kale, oo loo baahan yahay in lagu daaweeyo si looga fogaado dhimashada marxaladda hore.
Cudurka 'Pterostilbene' wuxuu door muhiim ah leeyahay markay tahay faafinta iyo dhimashada unugyada kansarka. Waxaa jira in kabadan hal shuruudo oo sababi kara unugyada caafimaadka qaba inay ku koraan unugyada kansarka. Si kastaba ha noqotee, Pterostilbene waxay ka hortagtaa unugyadan inay koraan waxayna sidoo kale bilaabaan hanaan la yiraahdo apoptosis oo sababa is-burburinta unugyada kansarka. Sidoo kale, waxay ka fogaan doontaa caabuqa NFκB.
Dhinaca kale, Resveratrol waxay ka caawin kartaa bukaanada kansarka adoo hagaajinaya jirka difaaca jirkiisa ee ka hortaga xagjirnimada unugyada ee bilaashka ah. Xagjirnimadan bilaashka ah waxay ku xiran yihiin horumarinta unugyada kansarka marxaladda koowaad.
Faa'iidooyinka wadnaha ee Resveratrol iyo Pterostilbene
Qalbigeennu waa sida mishiinka baabuurka xukuma. Mar kasta oo maqalka uusan u shaqeyneynin si sax ah, waxaa loola jeedaa in uu yaraanayo socodka dhiigga, taas oo, goor dambe, sababi karta dhibaatooyin badan oo dhanka wadnaha ah.
Daraasadaha sayniska waxay muujinayaan in Pterostilbene ay yareyn karto heerarka LDL (oo sidoo kale loo yaqaanno kolestarool xun) jirka. Dhibaatooyinka wadnaha waxay la xiriiraan kordhinta heerarka kolestaroolka dhiigga. Marka, iyadoo la yareeyo heerarkan, waxaa jiri doona fursado yarayn wadne qabad.
Resveratrol, dhanka kale, waxay naga difaacdaa cudurada wadnaha ee raaga iyadoo yareynaysa dhiig karka. Waxay u shaqaysaa iyada oo ka hortagaysa meelaynta cudurka daacuunka xididdada, sidaasna ay ugu oggolaato socodka hufnaanta ee dhiigga. Maaddaama dhiiggu si hufan ugu socdo, fursadaha dhibaatooyinka wadnaha ayaa yaraanaya.
Pterostilbene iyo miisaan lumis
Inaad yeelato miisaan aad u badan waxay noqon kartaa baaritaan n maxaa yeelay waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin sida cayilka. Si kastaba ha noqotee, yareynta qaar ka mid ah rodolku waxay kaa caawin kartaa inaad ka fogaato arrimaha noocaas ah. Resveratrol wuxuu kordhiyaa xaddiga dheef-shiid kiimikaadka, kaas oo u oggolaanaya jirkaaga inuu gubto keyd ahaan dufanka. Sidaa darteed, Waxaad awoodi doontaa inaad yareyso miisaanka. Sidaa darteed, waxaad sidaas ku heleysaa qaabka aad higsaneysid. Sidoo kale, marka la kordhiyo waxqabadka jimicsiga, waxaad horumarin doontaa miisaanka jirka oo wanaagsan. Sidoo kale, Pterostilbene wuxuu yareeyaa miisaanka isagoo hoos u dhigaya heerka kolestaroolka. In kasta oo aan lagu talin in la isku daro miisaanka oo yaraada daroogooyinka leh supplements-kaan
Faa'iidooyinka garashada ee Pterostilbene iyo Resveratrol
Jiritaanka xagjirnimo bilaash ah maskaxda waxay sababi kartaa xaalado sida geedi socodka gabowga oo kordha iyo cudurka Alzheimers. Inta badan dadka da'da ah waxay ku dhacaan dhibaatooyin sida xusuusta iyo nidaamka maqalka. In kasta oo xaaladahan ay kuxiran yihiin neurodegeneration, Pterostilbene, iyo Resveratrol cuntooyinka ayaa caafimaadkaaga wanaajin kara.
Isticmaalidda resveratrol-ka ugu fiican ayaa kaa caawin doona inaad ka adkaato saameynta da'da. Sidoo kale, Resveratrol waxay kordhisaa qaddarka insulinta-sida koritaanka factor-I. peptides-yadaani waxay kor u qaadaan koritaanka neerfayaasha (neurogenesis) iyo xididdada dhiigga (angiogenesis) ee maskaxda sidaas darteedna waxay sare ugu qaadeysaa awoodda garashada.
Xarunta waxay yareyn kartaa heerka garashada maskaxda. Dhanka kale, Pterostilbene waxaa loo aqoonsaday inuu yahay neuromodulator awood leh, taas oo u oggolaaneysa geedi socodka edging caadi ah. Waxay ilaalisaa unugyada maskaxda iyo dareemeyaasha, sidaasna waxay ku xaqiijineysaa shaqada caafimaadka maskaxda.
Pterostilbene iyo Resveratrol walaaca
Lahaanshaha niyadda sare waxay kaa ilaalin kartaa dhibaatooyinka la xiriira walaaca fekerka. In kasta oo ay jiraan xulashooyin daaweyn oo loogu talagalay welwelka, murugada, iyo welwelka, Pterostilbene way daaweyn kartaa walaaca, niyad jab, iyo arrimo kale.
Daraasad lagu doortay in lagu ogaado sida jiirku ula falgalo Pterostilbene waa inuu kordhiyo waxqabadka qaybaha maskaxda ee loo yaqaan amygdala iyo hippocampus. Kuwani waa meelaha muhiimka ah ee maskaxda ee leh xiriiriyaha niyadda, niyad-jabka, iyo welwelka. Sidaa daraadeed, daraasaddu waxay muujineysaa in Pterostilbene ay noqon karto xulasho daaweyn oo wanaagsan oo ku saabsan welwelka, walaaca, iyo niyad-jabka.
Budada Resveratrol waxay kaloo muujisay faa'iidooyin caafimaad oo dhici kara marka loo isticmaalo daweynta welwelka iyo dhibaatooyinka la xiriira isku buuqa. Saynis ahaan, waxaa laga yaabaa inay u shaqeyso adiga oo la falgala Endocannabinoid si ay gacan uga geysato nidaaminta qaabilaadda iyo hormoonnada la xiriira welwelka.
Nooca Sonkorowga II
Markaad cunayso cunno ay kujiraan xoog badan oo ah karbohaydraytyadu waxay sababi karaan nooca 2aad ee sonkorowga. Si kastaba ha noqotee, maahan oo keliya cunnooyinka karbuunka badan ee keena quusashada laakiin sidoo kale hoos u dhaca xasaasiyadda insulin-ta. Markaad ku soo dhowaato da'daada, jirku wuxuu bilaabi karaa inuu ogaado insulin badan. Sidaa awgeed, jidhkaagu wuu waayi doonaa xasaasiyadda insulin-ta.
Si kastaba ha noqotee, daraasadaha qaarkood waxay muujiyeen in cunista cunnooyinka Pterostilbene ay noloshaada ku yeelan karto wax wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, Peroxisome proliftoric-receptor-firfircoon (kaas oo xakameynaya sida jirkeennu uga falgalo soonka iyo bilowga ketogenesis). Sababtoo ah Pterostilbene waxay dhiirrigelisaa sida PPAR-α u shaqeyso, jirkaagu wuxuu gubi doonaa dufan badan, wuxuu yareyn doonaa heerka sonkorta ee jirka. Ma jiro xiriir toos ah oo ka dhexeeya Nooca Sonkorowga II iyo manfacyada 'Resveratrol' inkasta oo ay jiraan daraasado Resveratrol ah oo hadda la sameeyay.
Dhibaatooyinka soo raaca ee Pterostilbene iyo Resveratrol
Kahor intaadan isticmaalin wax dheeri ah oo ay kujiraan Pterostilbene ama Resveratrol, waa inaad go'aansataa waxyeelada ay leedahay. Daraasadda ku saabsan xeryahooda ayaa inta badan lagu qaadaa shaybaarka, in badan oo iyaga ka mid ahna ma muujiyaan waxyeelooyinka Pterostilbene iyo Resveratrol. In kasta oo qaadashada qiyaasta Resveratrol ee sare ay saameyn taban ku yeelan karto caafimaadkaaga. Waa wax caadi ah in lala kulmo saameyn khafiif ah, laakiin markii nidaamku sii socdo, markaa waa inaad la hadashaa dhakhtarkaaga. Si kastaba ha noqotee, waxyeelada kaliya ee Resveratrol illaa iyo hadda waxay soo warisay kororka heerka kolestaroolka LDL.
Marka la isbarbar dhigayo faa'iidooyinka caafimaad ee Pterostilbene Vs Resveratrol, waa inaad ogaataa arrimo kala duwan. Marka hore, waa inaad ogaataa haddii waxyeellooyinka qaarkood ee la soo sheegay inay waxyeellayn karaan jirkaaga. Marka labaad, isbarbar dhig qiyaasta qiyaasta Resveratrol iyo tan Pterostilbene. Intaas waxaa sii dheer, fahamka qiyaasta waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato xaddiga isku dhafka ay tahay inaad qaadato. Mar saddexaad, helitaanka xeryahooda ayaa ciyaari kara kaalin aad u muhiim ah maadaama aanad lacag badan ku bixin doonin Pterostilbene markaad ogtahay inaad heli karto kaabista ugu fiican ee resveratrol oo leh heer aad u sareeya.
Ugu dambeyntiina, isha ayaa wax badan taabaneysa, waxaan ognahay inaad ka heli karto supveratrol kaabis suuqa, laakiin sidoo kale, waxaa laga heli karaa miraha in kastoo tayo hooseeya. Marka, haddii aad heli karto mid si dhaqso leh looga heli karo, ka dib waxaad u kala sooci kartaa iyaga ugu fiican caafimaadka.
Langcake, P.; Pryce, RJ (1977). "Fasal cusub oo phytoalexins ah oo laga keenay canabka". Khibrad 33 (2): 151-2. doi: 10.1007 / BF02124034. PMID 844529.
Rimando AM, Kalt W, Magee JB, Dewey J, Ballington JR (2004). "Resveratrol, pterostilbene, iyo piceatannol oo ku jira berry vaccinium". J Beeraha Chem Chem. 52 (15): 4713–9. doi: 10.1021 / jf040095e. PMID 15264904.
Macmillan-Crow LA, Cruthirds DL; Cruthirds (Abriil 2001). "Dib u eegis lagu martiqaaday: manganese superoxide dismutase in disease". Radicis Bilaash ah. Res 34 (4): 325-36. doi: 10.1080 / 10715760100300281. PMID 11328670.
Sahebkar A, Serban C, Ursoniu S, Wong ND, Muntner P, Graham IM, Mikhailidis DP, Rizzo M, Rysz J, Sperling LS, Dibno GY, Banach M (2015). "La'aanta waxtarka resveratrol ee borotiinka C-reactive iyo xulashooyinka halista wadnaha iyo xididdada - Natiijooyinka ka soo baxa dib-u-eegis nidaamsan iyo falanqaynta maadada ee tijaabooyinka la xakameeyey". Int. J. Cardiol. 189: 47-55. doi: 10.1016 / j.ijcard.2015.04.008. PMID 25885871.
1.Waa Maxay Resveratrol?
2.Waa maxay Pterostilbene?
3.Pterostilbene Vs Resveratrol, waa maxay qiyaasta saxda ah?
4.Pterostilbene Vs Resveratrol Faa'iidooyinka Caafimaadka
5.Resveratrol iyo pterostilbene dheefaha kansarka
6. Faa'iidooyinka'Cardiovascular 'ee Resveratrol iyo Pterostilbene
7.Pterostilbene iyo miisaan lumis
8. Faa'iidooyinka garashada ee Pterostilbene iyo Resveratrol
9.Pterostilbene iyo Resveratrol walaaca
10.Type II Sonkorow
11.Siijinta saamaynta Pterostilbene iyo Resveratrol